Erdogan oo jawaab kulul siiyay Imaaraadka: waala ogyahay halkay awoowyaashaa joogeen - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Erdogan oo jawaab kulul siiyay Imaaraadka: waala ogyahay halkay awoowyaashaa joogeen
Erdogan ayaa jawaab kulul siiyay Imaaraadka oo dib u sii faafiyay qoraal lagu qorey twitter-ka oo lagu dhaleecaynaayay dawladii Muslimka ee Cismaaniyiinta.
Wasiirka arimaha dibedda ee Imaaraadka ayaa qoraal nin Ciraaqi ah oo ku nool Jarmalka uu ku qorey twitterka kuna sheegay in Cismaaniyiintu bililiqaysteen Madiina, alaabtiina u rareen Dimishiq iyo Istaanbuul dib u sii faafiyay.
Wuxuuna ninkaasi intaas ku daray inay tani tahay taariikhda Erdogaan. Erdogaan oo jawaab ka bixiyay ayaa yiri ”waala ogyahay halkad joogtey markii Farhudin Pasha oo ahaa jeneraal ka tirsan Cismaaniyiinta uu gaalada ka badbaadiyay Madiina.
Farhudiin Pasha ayaa gobolka Xijaaz ee Sucuudiga ee Makka iyo Madiina ku yaalaan si fiican uga difaacay gaalada una diidey inay cagaha soo geliyaan kadib markii ay soo weerareen Carab munaafiqiina oo Ingiriisku wato iyo ciidamadii isbahaysiga ee ka soo horjeeday Jarmalka.
Erdogaan oo Carabta xasuusinaya arintan ayaa cadeeyay halka Farhudiin Pasha ka joogo Muslimiinta dhexdeeda iyo munaafaqdii Carabtu kula kacdey dawladii Muslimka ahayd ee Cismaaniyiinta.
Imaaraadka iyo Sucuudiga ayaa fuliya qorsheyaal ka dhana Erdogaan. Burburka dawladii Cismaaniyiina ayaa waxa kow ka ahaa Carab munaafiqiina oo Ingiriisku soo kaxaystey si uu ula dagaalamo dawlada Muislimka ah oo ay mari waayeen.